ओक्सीटसिन इंजेक्शन (Pitocin) - चीन Ningbo दोस्रो हर्मोन
ओक्सीटसिन इंजेक्शन (Pitocin) (व्यापार नाम: Chanqingsong) [विवरण] यो उत्पादन एक बेरंग पारदर्शी तरल छ। [प्रकार्य र प्रयोग] यो सीधा गर्भाशय चिल्लो मांसपेशीमा उतेजित गर्नु सक्नुहुन्छ, र uterine contractions बलियो बनाउँछ। ओक्सीटसिन मा गर्भाशय को जवाब सेक्स हर्मोन प्रभावित छ। progesterone ओक्सीटसिन गर्न गर्भाशय को संवेदनशीलता लाइ रोक्छ गर्दा एस्ट्रोजन, ओक्सीटसिन गर्न गर्भाशय को संवेदनशीलता बढाउन सक्छ। ओक्सीटसिन को एक सानो खुराक uterine मांसपेशीमा र ताल contractions बृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ ...
ओक्सीटसिन इंजेक्शन ( Pitocin )
(व्यापार नाम: Chanqingsong)
यो सिधै गर्भाशय चिल्लो मांसपेशीमा उतेजित गर्नु सक्नुहुन्छ, र uterine contractions बलियो बनाउँछ। ओक्सीटसिन मा गर्भाशय को जवाब सेक्स हर्मोन प्रभावित छ। progesterone ओक्सीटसिन गर्न गर्भाशय को संवेदनशीलता लाइ रोक्छ गर्दा एस्ट्रोजन, ओक्सीटसिन गर्न गर्भाशय को संवेदनशीलता बढाउन सक्छ। ओक्सीटसिन को एक सानो खुराक uterine मांसपेशीमा र भ्रूण प्रसब गर्न लाभदायी छ जो लेट गर्भावस्था, समयमा uterine चिल्लो मांसपेशीमा को विश्राम को ताल contractions बृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ; ओक्सीटसिन को ठूलो खुराक tetanic संकोचन परिणामस्वरूप, uterine मांसपेशीमा को तनाव बढ्छ। चिकित्सकीय, यो, parturition, postpartum गर्भाशय रक्तस्राव hastening मा मुख्य रूप लागू गरिन्छ भ्रूण झिल्ली, lactation, लगातार कर्पस luteum, stillbirth को उपचार, uterine रिकभरी र कुखुरा लागि कृत्रिम गर्भाधान को पदोन्नति खुलिरहेको।
1 Hastening parturition: यो कमजोर uterine contractions कारण विभिन्न जनावर लागि dystocia मा लागू गर्न सकिन्छ। गाई र घोडाहरू लागि 75-100IU को Intramuscular इंजेक्शन, सुंगुर र भेडा लागि 30-50IU, कुकुर लागि 10-25IU र बिरालोहरु लागि 5-10IU एकल खुराक को लागि लागू गरिनेछ। वितरण समय धेरै लामो छ र Vivo मा एस्ट्रोजन घट्छ भने, एस्ट्रोजन ओक्सीटसिन गर्न गर्भाशय को संवेदनशीलता सुधार ताकि ओक्सीटसिन प्रयोग गर्नु अघि इंजेक्शन गरिनेछ।
2. Luteolysis: यो गाई लागि लगातार कर्पस luteum उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ; 400IU को intramuscular इंजेक्शन कुल लागू गरिन्छ; यसलाई 2-4 विभिन्न समयमा इंजेक्शन गरिनेछ।
uterine रोगहरु को3उपचार: यो endometritis, uterine inertia (गर्भाशय को subinvolution) को उपचार को लागि प्रयोग, र वितरण पछि भ्रूण झिल्ली खुलिरहेको छ। Estradiol पहिलो (, मध्य-आकारको पशुधन लागि 10-20mg 5-10mg सानो जनावर लागि ठूलो पशुधन लागि 20-30mg र), इंजेक्शन पर्छ, अनि त्यसपछि ओक्सीटसिन गाई र घोडाहरू लागि उपचारको लागि प्रयोग गरिनेछ (75-100IU 30- सुंगुर र भेडा, कुकुर लागि 10-25IU लागि 50IU र 5-10IU बिरालोहरु लागि); intramuscular इंजेक्शन वा intrauterine इंजेक्शन लागू गरिनेछ, एकचोटि हरेक7दिन।
4 दूध इन्जेक्शन: यो acini मा दूध को इन्जेक्शन सुविधा, को mammary ग्रंथि को ग्रन्थि उपकला कक्षहरूको संकोचन प्रवर्द्धन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। intramuscular इंजेक्शन को एक एकल खुराक सुंगुर र भेडा लागि गाई र घोडाहरू, र 5-20IU लागि लागू गरिनेछ, 10-20IU।
1 parturition hastening लागि प्रयोग गर्दा, यो केवल कमजोर uterine contractions मा लागू गर्न सकिन्छ। यो obstructed जन्म नहर, malposition र जन्म नहर stenosis कारण dystocia मा contraindicated छ।
2. एस्ट्रोजन Vivo मा अपर्याप्त छ, यो uterine contractions कुनै प्रभाव छ।
10 × 1ml: 10 units 10 × 2ml 20 units
अघिल्लो: लागि इंजेक्शन Bovines र सुँगुर LHRH-A3
अर्को: इंजेक्शन लागि pituitary Follicle उत्तेजक हर्मोन (FSH)
56-6 ओक्सीटसिन - ओक्सीटसिन
56-6पाउडर पेप्टाइड ओक्सीटसिन
6 ओक्सीटसिन - ओक्सीटसिन
6 ओक्सीटसिन एसीटेट - ओक्सीटसिन
6 ओक्सीटसिन शरीर निर्माण को लागि - ओक्सीटसिन पाउडर
6 ओक्सीटसिन स्टक मा - ओक्सीटसिन
6 ओक्सीटसिन ओक्सीटसिन मूल्य - ओक्सीटसिन मूल्य
6 पाउडर पेप्टाइड ओक्सीटसिन - ओक्सीटसिन पाउडर
6 शीर्ष गुणवत्ता ओक्सीटसिन - ओक्सीटसिन Lyophilized
99% शुद्धता औषधि कच्चा माल
सर्वश्रेष्ठ ओक्सीटसिन मूल्य
कैस 50- 56-6 ओक्सीटसिन पाउडर
कैस No.50-56-6 ओक्सीटसिन
एपि / खासियत / बीपी - ओक्सीटसिन पाउडर
कारखाना सर्वश्रेष्ठ ओक्सीटसिन मूल्य
कारखाना आपूर्ति ओक्सीटसिन
उच्च शुद्धता कैस 50-56-6 ओक्सीटसिन
उच्च शुद्धता ओक्सीटसिन
उच्च गुणस्तर ओक्सीटसिन
उच्च गुणस्तर ओक्सीटसिन जीएमपी कारखाना
मानव इंजेक्शन ओक्सीटसिन
ओक्सीटसिन एसीटेट पाउडर
ओक्सीटसिन एसीटेट पाउडर - ओक्सीटसिन
ओक्सीटसिन एसीटेट मूल्य
ओक्सीटसिन इंजेक्शन (Potocin)
ओक्सीटसिन Manufactuer Atonin
ओक्सीटसिन Manufactuer औषधि
ओक्सीटसिन बिक्री मा
ओक्सीटसिन मूल्य पाउडर
ओक्सीटसिन कच्चा माल
ओक्सीटसिन Uterine सङ्कुचन
ओक्सीटसिन उत्कृष्ट पवित्रता संग
पेप्टाइड ओक्सीटसिन पाउडर
औषधि मध्यवर्ती ओक्सीटसिन
औषधि कच्चा मेटर ials ओक्सीटसिन
पाउडर पेप्टाइड ओक्सीटसिन ओक्सीटसिन
कच्चा माल पाउडर पेप्टाइड ओक्सीटसिन
कच्चा ओक्सीटसिन पाउडर
व्यावहारिक Pri इस्वी संवत् ओक्सीटसिन
शीर्ष ओक्सीटसिन मूल्य